U isticmaal iPhone-gaaga galoofyo gacmo gashi oo tayo iyo xarrago leh mahad Mujjo | Wararka IPhone
Marar badan markaad raadineyso qalab ku habboon iPhone-kaaga waxaad moodaa inay khilaafsan yihiin tayada iyo xarrago, tusaalaha ugu wanaagsan ee tani waa galoofyada awood u leh inay ku isticmaalaan taleefanka casriga ah waddada marka qabowgu jiro. Maaddooyinka xunxun, naqshadaha naxdinta leh ee faraha badan oo midabbada kale ka geddisan ka baxsan, iyo ceeb dhammaysta. Nasiib wanaagse maahan inay sidan ahaato oo Mujjo wuxuu ina tusayaa gacmo gashiyo kala duwan oo aad u fiican oo la jaan qaadi kara shaashadda taabashada taleefanka casriga ah. Waxay leedahay maqaar gacmo gashi iyo suuf, labada xaaladoodba tayada iyo naqshadeynta wanaagsan ayaa iyaga ka dhigaysa hadiyadda ugu habboon ee Kirismaska.
1 Galoofyo Gacmo-gashi oo keli ah
2 Galoofyada taabashada maqaarka
3 Laba gacmo gashi iyo laba qiime
Galoofyo Gacmo-gashi oo keli ah
Tani waxay ahayd doorashadayda markii aan iibsanayay galoofis sanadkii hore. Waxaan rabay galoofisyada maalin kasta la isticmaalo laakiin ma ahan sida kuwa aad dukaamada ka hesho "Todo a 100", qalab tayo leh iyo naqshad aan qaylinayn "Waxaan xiraa galoofisyo si aan u isticmaali karo iPhone-kayga". Go'aanka ma noqon lahaa mid guuleysta maxaa yeelay marka lagu daro inay si dhammaystiran u guteen hadafkooda ah inay awood u leeyihiin inay adeegsadaan iphone-kayga wadada, gacmahayga sifiican ayaa loo ilaaliyay, iyo waqtiga la soo dhaafay, sida aad ku arki karto sawirada, way adag tahay ay ogaadeen iyaga, inay wali ku sugan yihiin xaalad jiilaal ah.
Suufka oo ay weheliso waxyaabo isdhaafsan taas oo u ogolaaneysa shaashadda in la isticmaalo waa qalabka loo isticmaalo galoofisyadan, oo waliba leh kubbado yaryar oo silikoon ah oo ku yaal dhammaan calaacasha iyo salka faraha si aad u qaban karto iPhone-kaaga adigoon ka baqaynin siibasho. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad iPhone-gaaga kala soo baxdo jeebkaaga dhibaato yar oo haysa adigoon iska bixinaynin galoofyadaada.
Gacan-gashiyada ayaa lagu dhammeeyey maqaar-gacmeed iyo loop isla sheyga ah oo ku hagaajinaya curcurkaaga. Qaabka sanadkan, halkii uu ka ahaan lahaa xajin caadi ah, xajinta waa magnet, taas oo ka dhigeysa mid raaxo leh in la furo oo la xiro. Qiimaheedu waa mid aad u xiiso badan: € 29,95 waana ka iibsan kartaa midkeeda bogga rasmiga ah.
Galoofyada taabashada maqaarka
Halkan waxaan horeyba uga hadleynaa badeecad tayo sare leh, oo si cad u ah qiime waafaqsan, laakiin in ka badan hal ayaa jacayl ku dhici doona. Gacan-gashiyada maqaar-gacmeedka Mujjo waa la yaab dhab ah oo laga sameeyay lambarada Itoobiya, iyo naqshadeynta xargaha ee curcurka waxay siisaa muuqaal geesinimo iyo casri ah. Sideedaba qofna ma qiyaasi karo in kuwani ay yihiin galoofyo aad ugu adeegsan karto mobilkaaga, maxaa yeelay ma jiraan wax raadkiisa ugu yar haba yaraatee inta aad u fiirsato.
Furka wuxuu kuxiran yahay xajin magnet aad u raaxo badan iyo galoofyada gudahood waxay ku dhagan yihiin walax aan ka soo bixinayn maqaarka sare: cashmere. Waxyaabahaas oo dhan, qiimaheedu ma noqon karo mid raqiis ah: € 99,95. Laakiin daqiiqad yar, iska ilow inay tahay su'aal galoofyada in la isticmaalo mobilada oo la qiyaaso waxa labo gacmo gashi sida kan aan ku tilmaamayo dukaan kasta ay ku kici karaan.
Soo bandhigida galoofyadaan gacmaha ee Mujjo waxay u dhigantaa tayadooda iyo qiimahooda, isagoo hadiyad aad u fiican qof kasta this Christmas. Waxaad ka iibsan kartaa kuwaaga dukaanka rasmiga ah adoo isticmaalaya kaarka amaahda ama PayPal.
Laba gacmo gashi iyo laba qiime
Sida iska cad, kuwa raadinaya kaliya galoofyada si ay gacmahooda u kululaadaan inta ay wadada aadayaan xilliga qaboobaha ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan qiimo sare oo ah € 99, ​​laakiin € 29,95 oo ah nooca dhogorta ayaa ka dhigeysa qofka ugu haboon. Kuwa doonaya galoofisyada gacmo gashi ee tayo sare leh ma helayaan nooc ka fiican kan Mujjo. taas oo sidoo kale u oggolaan doonta inay adeegsadaan taleefannadooda casriga ah.
Labada noocba waa kuwo aad u jawaaba markii loo adeegsado shaashadda iPhone-ka. In kasta oo teeb garaynta ay tahay mid khiyaano badan (bisad gacmo gashi ma qabato jiir), furitaanka, furitaanka codsiyada ama qabashada hawl kasta oo kale oo aan u baahnayn saxnaan badan ayaa suurtogal ah iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » U isticmaal IPhone-kaaga galoofyo gacmo gashi oo tayo iyo xarrago leh mahad Mujjo
Facebook hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daabacdo iOS LivePhotos
Dukaamada Apple waxay iibin doonaan qalabka curyaanka laga bilaabo 2016